I-China Ikota yesithathu ibona abakhiqizi nabanikezeli bezokwengeza bezohwebo lwangaphandle Amanzi eTspring
Ukuhwebelana kwangaphandle kweChina kwandiswe kwikota yesithathu kuya eqophelweni eliphezulu, okwenza ukukhula okwenyuka unyaka nonyaka kokuthunyelwa kwamanye amazwe nokungeniswa kuphume kokubi kuye kokuhle, ngokusho kwedatha yamasiko.
Ukukhula okuphezulu kokuthekelisa emazweni angaphandle ngama-dollar kukhuphuke kwafinyelela kumaphesenti ayi-9.9 ngonyaka ngoSepthemba kusuka kuma-9.5% ngo-Agasti, okukhomba inyanga yesithupha elandelanayo yezibalo zokuthekelisa eziphakeme kunesibikezelo semakethe.
Ukungeniswa kwempahla, okwamanje, kukhuphuke ngamaphesenti ayi-13.2 kusukela onyakeni owedlule, kuguqula ukwehla kwamaphesenti ayi-2.1 unyaka nonyaka ngo-Agasti, ngaphezu kokulindelwe kwezimakethe kanye nokunciphisa imali eyinsada yokuhweba yaba ngu-US $ 37 billion ngoSepthemba isuka ku-US $ 58.9 billion ngo-Agasti.
Ukuqina kweChina emazweni angaphandle kuqhutshwa kakhulu yisimo sayo njengomnotho wokuqala futhi owokuqala ophume kubhubhane lwe-COVID-19, olube nomthelela ekwandeni kokuthekelisa okuthekelwayo kwe-PPE (okokuvikela komuntu) kanye nemikhiqizo yokusebenza / yokufunda-evela ekhaya , ngenkathi izimbangi zisacwila kulo bhubhane, ngokusho kwenkampani yezinsizakalo zezezimali iNomura.
"Ukukhuphuka kwezimpahla ezithunyelwa eChina kungahlala kuphakanyisiwe ezinye izinyanga ezimbalwa ngenxa yamagagasi aphindaphindiwe e-COVID-19 phesheya kwezilwandle," kusho uLu Ting, isazi sezomnotho saseChina, uNomura. "Ngakolunye uhlangothi, ukwenziwa ngcono kukaSepthemba ekukhuleni kokungeniswa kwezinto eziningi ezinkulu ngokomthamo kuphakamisa ukuthi kunesidingo esithe xaxa sasekhaya kanti okunye kuyabuyiselwa."
UGoldman Sachs ulindele namandla okuthekelisa kwamanye amazwe ukuthi aqhubeke ezinyangeni ezizayo nokuthi ukungenisa ngaphakathi ezweni nakho kungaqhubeka nokwanda ngemuva kokululama okuqhubekayo emisebenzini yasekhaya.
Ezingxenyeni ezintathu zokuqala zonyaka we-2020, ukuhweba okuphelele kwamanye amazwe kukhuliswe ngamaphesenti ayi-0.7 ngonyaka kuya ku-23.12 trillion yuan (US $ 3.43 trillion), nokuthunyelwa kwamanye amazwe kungeze kufinyelela ku-12.71 trillion yuan, ukwanda kwamaphesenti ayi-1.8 kusukela ngonyaka owedlule, ngenkathi kungeniswa kwamanye amazwe lifakwe ngo-0.6% laya ku-10.41 trillion yuan, kusho abakwaGeneral Administration of Customs ngoLwesibili.
"Ngenxa yomthelela omkhulu wobhubhane lwe-COVID-19, iChina isiqinise ukusabela kwayo ngemigomo emikhulu, yenze imizamo eqinile yokuqinisekisa uzinzo ezinhlangothini eziyisithupha nokuvikeleka ezindaweni eziyisithupha," kusho uLi Kuiwen, umqondisi womnyango wezibalo zaleli siko.
"Senze impumelelo enkulu ekuvikeleni nasekulawuleni ubhadane jikelele nasekuthuthukiseni ezomnotho nakwezenhlalo, futhi nomphumela wezinqubomgomo ekuqiniseni ukuhwebelana kwangaphandle kuqhubekile nokuvela, ukungeniswa nokuthunyelwa kwamanye amazwe kungcono kakhulu kunalokho obekulindelekile," kusho uLi.
Ngemuva kokubhekana nokushaqeka kwikota yokuqala, ukungeniswa kwempahla kanye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kutholakale kakhulu esikhathini sika-Ephreli-Juni yize kusathumela ukwehla okuncane konyaka nonyaka.
Kwikota yesithathu, ukungeniswa nokuhwebelana kwangaphandle kweChina kanye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kungeze ama-yuan angama-8.88 trillion, kukhuphuka amaphesenti ayi-7.5 ngonyaka, phakathi kwalokhu okuthekelisa kukhuphuke ngamaphesenti ayi-10.2 kuya kuma-5 trillion yuan kanti ukungenisa kwamanye amazwe kukhuphuke ngamaphesenti angu-4.3 kuya kuma-yuan ayi-3.88 trillion. Zonke lezi zinombolo beziphezulu isikhathi sonke ngekota.
I-Association of Southeast Asia Nations ibingumlingani omkhulu wezokuhweba waseChina ezingxenyeni ezintathu zokuqala.
Ukuhwebelana kwamazwe angaphandle kweChina ne-ASEAN kudlule ku-3.38 trillion yuan, okuwukukhuphuka kwamaphesenti angu-7.7, ukubala amaphesenti angu-14.6 wenani eliphambili lezentengiselwano laseChina ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala.
Ukuhweba ne-European Union kwengeze ama-yuan angama-3.23 trillion, kukhuphuke amaphesenti angu-2.9, okwenza umlingani wesibili ngobukhulu kwezokuhweba e-EU China. Ukuhwebelana kweChina ne-United States kwabuye kwehla kusuka ekunciphiseni kwangaphambilini, ngenani lenyuka ngamaphesenti ama-2 laya ku-2.82 trillion yuan ngalesi sikhathi.
Ukuhwebelana namazwe agudle iBelt noMgwaqo, okwamanje, kukhule ngamaphesenti ayi-1.5 kwaba ngu-6.75 trillion yuan wonke.
Amasiko aqokomisa ukukhula okusheshayo kwezohwebo lwangaphandle ngamabhizinisi azimele. Ezingxenyeni ezintathu zokuqala zonyaka, banikele ngenani eliphelele lama-yuan ayizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-10.66 ekuthengisweni nokungeniswa kwangaphandle kweChina, kukhuphuke ngamaphesenti ayi-10.2 ngonyaka, kubalwa amaphesenti angama-46.1 enani eliphelele lenani lokuhweba langaphandle elalingamaphesenti ama-4 ukuphakama kunalokufanayo isikhathi ngonyaka odlule.
Kuleli nani eliphelele, amabhizinisi azimele athumele ukuthunyelwa okuphelele kwe-yuan engu-7.02, ukwanda okukhulu kwamaphesenti ayi-10, okubalwa ngamaphesenti angama-55.2 enani eliphelele lokuthunyelwa kwangaphandle kweChina, ngenkathi ukungenisa kwenyuka ngamaphesenti ayi-10.5 kuya kuma-3.64 trillion yuan, kubalwa amaphesenti angama-35 we ukungeniswa kwesihloko esikhulu.
Ngesikhathi esifanayo, amabhizinisi atshaliwe angaphandle anikele ngokungeniswa nokuthunyelwa kwamanye amazwe kwama-yuan ayi-8.91, abalwa ngamaphesenti angama-38.5. Ukungeniswa nokuthunyelwa kwamabhizinisi aphethwe nguhulumeni kudlule ku-3.46 trillion yuan ukubalwa ngamaphesenti ayi-15 esewonke.
Uhlaka lwephethini yezohwebo lwenziwe ngcono ngokuqhubekayo, kanti nenani lokuhwebelana okujwayelekile ekuhwebeni kwamanye amazwe ezweni lonke likhula kakhulu, kusho uLi.
Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala, ukuhweba okujwayelekile kweChina kukhuphuke ngamaphesenti angu-2.1 kuya ku-8.55 trillion yuan, okubalwa ngamaphesenti angama-60.2 kokuthekelisa nokuthekelisa okuphelele okwakungamaphesenti angu-0.8 amaphuzu aphezulu kunangesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Mayelana nezimboni, ukuthunyelwa kwamanye amazwe ngezinto zokuvikela ubhubhane, ama-laptops nemishini yasekhaya kwenziwe kahle, ngenxa yezinguquko zendlela yokuphila ezalethwa yilo bhubhane.
"Ukwethulwa kwemikhiqizo emisha yabathengi kanye nokufunwa kwamagajethi asebenza ekhaya kukhuphule ukuthengwa kwempahla kanye nomjikelezo womkhiqizo," kusho uBetty Wang, usomnotho omkhulu waseChina e-Australia naseNew Zealand Banking Group.
ULu kaNomura ukholelwa ukuthi isidingo sama-laptops singahlala siqinile izinyanga ezimbalwa, “njengoba singesinye sezinsimbi ezibalulekile ezidingekayo ekufundeni nge-inthanethi, yize amandla aso enziwa abe buthakathaka njengoba abantu abadinga usizo besesikoleni.”
Okunye okuqaphelekayo, ukuthi ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwemithi namakhambi ezokwelapha kweqe ngamaphesenti angama-21.8, kwathi okamathuluzi wezokwelapha kanye nezinto zokusebenza kwanyusa amaphesenti angama-48.2.